Maxaa laga filan karaa kulanka u dhaxeeya Farmaajo iyo Rooble oo ka furmay Madaxtooyada Soomaaliya? | Star FM
Home Wararka Soomaaliya Maxaa laga filan karaa kulanka u dhaxeeya Farmaajo iyo Rooble oo ka...
Maxaa laga filan karaa kulanka u dhaxeeya Farmaajo iyo Rooble oo ka furmay Madaxtooyada Soomaaliya?
Goor dhow xarunta Madaxtooyada qaranka Soomaaliya waxaa si rasmi ah uga bilowday kulan u dhaxeeya Madaxweyne Farmaajo iyo Ra’iisul wasaare Rooble.
Waxaa tan iyo shalay deggan xaaladda siyaasadeed ee Muqdisho, ka dib dedaallo dhexdhexaadin ah oo la isugu soo dhaweynayo madaxweyne Maxamed Cabdullahi Farmaajo iyo ra’iisal wasaare Maxamed Xuseen Rooble.
Previous articleDowladda oo amartay In dib loo furo dugsiyada ismaamulka Laikipia laga bilaabo Isniinta
Next articleWaaxda DCI-da oo bilowday baaritaano lagu baadi goobayo aqoonyahan Sh Cabdiwahaab